सिलिुचङ डट कम किन ? - silichung.com
सिलिुचङ डट कम किन ?
२००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न भोजपुरमा रेडियो नेपालको स्थापना भयो । नेपाली राजनीति र सञ्चार जगतलाई बुझनेहरु त्यसरी नै भोजपुरलाई चिन्ने गर्छ । प्रजातन्त्र स्थापना उद्घोष गर्न नारदमुनी थुलुङ र रामप्रसाद राईले स्थापना गरेको रेडियो नेपाल सिंहदरवारमा पुगेर नेपाली आधुनिकतासंगै परिष्कृत हुदै गइरहेको छ । २००७ सालका योद्धा नारादमुनी थुलुङ र रामप्रसाद राईले प्रजातन्त्रको सन्देश प्रवाह गर्नका लागि रेडियो प्रजातन्त्र पछि गएर रेडियो नेपाल भएको थियो । तीनै रेडियो नेपाल सबै जनताहरुको कानमा गुञ्जायमान छ । रेडियो नेपालको लामो इतिहासपछि ०४६ यताको प्रजातन्त्रपछि धेरै सञ्चार माध्यमहरु खुले । सञ्चारमाध्यहरुको विकास र विस्तारले मानिसहरुलाई चेतना अभिबृद्धिमा ठुलो टेवा मिल्यो । मानिसको चेतनास्तर उकास्न स्थापना भएका सञ्चारमाध्यमहरुले आधुनिक समाज विकासलाई टुेवा पु¥यायो । समग्र देश र सुविधासम्पन्न स्थानहरुमा त्यसको प्रभाव रहयो भने भोजपुर जस्तो दुर्गम क्षेत्रहरुमा त्यसको प्रभाव राम्ररी पुग्न सकेन । बिडम्बना भनौं विकासको पूर्वाधारहरुको विस्तार नभएकै कारणले पनि ग्रामिण तहमा सञ्चारमाध्यमहरुको विकास र बृद्धि भएन । काठमाडौं लगायत सुविधासम्पन्न शहरहरुमा स्थापना भएका सञ्चारमाध्यमहरुले ग्रामिण क्षेत्रहरुमा पुग्न सकेन । यदी पुगिहाले पनि त्यहाँ रहेको बास्तविकतालाई समेटन नसकेकाले सिलिचुङ मिडिया ग्रुपले सञ्चारमाध्यमहरु स्थापना गरी ग्रामिण क्षेत्रका जनताहरुलाई सुसुचित गर्दै ल्याएको छ ।
सिलिचुङ मिडिया गु्रपको अभियान नैतिक, चारित्रिक र भौतिक विकासको पाठ समाजलाई दिनु हो । सिलिचुङ मिडिया कसैलाई प्रतिशोध साध्न होइन यो त चेतनाको त्यो झिल्को दिदै हाम्रो दृष्टिलाई फराकिलो बनाउँदै लानु हो । यसले समाजमा रहेको चेतनशिल प्राणी मानिसहरुको विचारलाई प्रष्ट अझ विचारशील बनाउदै लाने छ । यसले हाम्रो समाजमा भइरहेको कामलाई ठीक बनाउँछ र हाम्रो जीवनलाई थप सहज बनाउन मद्दत गर्छ । जसले सूचनाको माध्यमबाट, विचार विमर्शको माध्यमबाट, चिन्तनको माध्यमबाट र प्रयोगको माध्यमबाट हामीलाई सत्यको निकट पु¥याउने काम गर्छ । सत्यको नजिक पुगेरमात्रै हामीले ठीक कामलाई प्रोत्साहित गछौं । सञ्चारक्षेत्रमा सिलिचुङ अनलाइन त्यही कुरालाई अगाडी बढाउने एउटा सशक्त पाइलाको रुपमा अगाडी सारिएको छ ।
सिलिचुङ मिडिया गु्रपले साप्ताहिक पत्रिका लामो समयदेखि प्रकाशन गर्दै आएको छ । तीनै साप्ताहिकको अनलाइन संस्करणको रुपमा हामीले शुरु गरेको छौं । साथै निकट भविष्मा टेलिभिजन समेत शुरु गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । साप्ताहिक पत्रिकाले समेटन नसकेको पठाकहरुको लागि अनलाइनले समेटने र सबै खालको पाठकवर्गहरुको पहुँचलाई विस्तार गर्नका लागि अनलाइन शुरु गरेका छौं ।
सिलिचुङ डटकम सूचना तथा विश्लेषणको खोजी रहनेहरुका लागि छिनछिनको समाचार पोर्टल हो । यसमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, खेलकुदलगायत सबै क्षेत्रका मुद्दाहरु उठाउने जमर्को हुनेछ । निर्भिक, निष्पक्ष, सत्य र पारदर्शी सबैका लागि सुचना हो भन्ने आदर्शबाट अभिप्रेरित भएर हामी समाचार सम्प्रेषण गरिरहने छौं । स्पष्ट विचार र तथ्यमा आधारित सत्य समाचार यसको मूल आधार हुनेछ ।